Kupa Chikwata Chako NeSustainable Analytics Advantage
Motio inoshandura inonetesa Administrative BI mabasa uye inowedzeredza inorema BI kusimudzira maitiro ekuti ako maAnalytic Nyanzvi atarise pane izvo zvavari kugona: kuendesa anoshanda ungwaru kune vebhizinesi maneja kuvapa iwo uzere mufananidzo webhizinesi ravo.
Soterre YeQlik Sense SaaS Ichangobva Kutangwa!
tenga Soterre ikozvino uye gamuchira vhezheni kutonga kweMAHARA kusvika pakuburitswa kunotevera!
Waizviziva Here Kutsigira Kwekutanga KweGitoqlok Yemahara?
Kana iwe uri kutoshandisa Gitoqlok, iyo yemahara plugin yeQlik Sense iyo inoshandura zvinoonekwa zvinhu uye data remedha zvinyorwa zvakananga mubrowser yako, saka ita chokwadi chekunyoresa kutsigirwa kweprimiyamu! Hazvina mahara zvachose!
Bata nesu pane chimwe chezviitiko zvedu zviri kuuya uye webinars.
Wona Zvese Zviitiko & Webinars
Yedu software mhinduro dzinokubatsira iwe kuwana BI kubudirira muCognos Analytics uye Qlik.
ne Motio® software padivi rako, iwe unowana kugona mune rako basa, unatsiridza mhando uye kurongeka kweine ruzivo zvinhu, kuwedzera chikuva mashandiro, kuwana nguva inokurumidza kumusika, uye tora kutonga pamusoro pekutarisira maitiro.
Mhinduro dzekurerutsa Cognos kukwidziridzwa, deployments, shanduro kudzora & shanduko manejimendi, otomatiki kuyedza & manejimendi mabasa, kugadzirisa mashandiro, kugonesa CAP & SAML, uye namespace kutama / kutsiva.
Mhinduro dzeshanduro yekudzora uye shanduko manejimendi muQlik uye nekuvandudza mashandiro emabasa.
Vatengi Vanobudirira Nhau
Usango tora izwi redu kwazviri. Verenga nezve vatengi vedu uye sei Motio yakavabatsira kuvandudza mapuratifomu avo e analytics uye kusevha yakakosha nguva nemari.
Yemari Femu Yakavakirwa paTrust Baker Tilly inotungamira yezano, mutero, uye vimbiso yakasimba yakatsaurirwa kuvaka hukama hunogara kwenguva refu nevatengi vayo. Chinangwa chayo ndechekuchengetedza kukosha kwayo kwevatengi munyika inogara ichichinja. Iyo kambani inosimbisa kuvaka chivimbo…
Kubva 2006, HealthPort yakashandisa zvakanyanya IBM Cognos kuti ipe nzwisiso inogoneka mukushanda uye sarudzo dzehurongwa pamatanho ese ekambani. Sekambani iri kumberi kwekuteerera kweHIPAA, chengetedzo inogara ichinyanya kunetseka. "Imwe yezvirongwa zvedu zvenguva pfupi yapfuura yanga iri yekubatanidza humbowo hwezvakawanda zviripo zvikumbiro zvichipesana neyakajairwa, inodzorwa zvakasimba Active Directory zvivakwa,"
TELUS, inotungamira yenyika foni kambani muCanada, yaive nechishuwo chakasimba chekumhanyisa kukura nekuita kwenzvimbo dzadzo dzeBM Cognos. Zvisinei, vaive nemazana emishumo…
Bhizinesi reBusiness Intelligence (BI) kuCIRA rinoshandisa nzira isinganetsi yekuvandudza nekuendesa ruzivo kumitsara yavo yebhizinesi. Kutevedzera MotioCI yakatsigira kuchinjika kwavo kune yakashata nzira, ichigonesa CIRA kukurumidza kusundira nguva-inonzwisisika dhata kune vashandisi vayo vebhizinesi. MotioCI yawedzera mashandiro eCIRA BI yekuvandudza maitiro uye yakadzikisa huwandu hwenguva inotarisirwa kugadzirisa matambudziko.
Wona Ese Makesi Ekudzidza
verenga Motio chigadzirwa "how-to's," BI yakanakisa maitiro & maindasitiri maitiro, uye nezvimwe.
Business AnalyticsBhizinesi Njere
Dzinopenga uye dzakazara! Ini ndakambonyora nezvemumvuri IT pano. Muchinyorwa ichocho tinokurukura kuwanda kwayo, njodzi yayo uye magadzirirwo ayo. Ndakanga ndisingazive kuti Feral Information Systems (FIS) yaive chinhu. Mboro yandakanga ndanzwa. Isu chaizvo...